I-Ultrasonically Fomated Famotidine Solid-Lipid Nanoparticles - Hielscher Ultrasound Technology
I-Famotidine yi-molecule ejwayelekile yezokwelapha esetshenziswa emithini yesishisa. Ukuze unqobe i-solubility empofu kanye ne-bioavailability ebumpofu, i-Famotidine ingakhiwa ibe yi-nanoparticles eqinile-i-lipid isebenzisa i-sonication njenge ndlela yokufunda.
I-Ultrasonically Famotidine-Loaded Solid Lipid Nanoparticles
I-Sonication isetshenziswa kabanzi ekwenziweni kwemithi, imigomo kanye nezithasiselo zokudla. Isicelo esibalulekile ukwakhiwa, ukugoqa kanye / noma ukufakwa kwamamolekyuli we-bioactive (okusho izidakamizwa zezidakamizwa) kumasistimu wokulethwa kwezidakamizwa we-nano ahlelwe njenge-nanoparticles eqinile-lipid, liposomes, niosomes, ukufakwa kwezihlanganisi noma ama-polymeric nanoparticles.
I-Famotidine yi-H2 receptor blocker kanye nenhlanganisela esebenzayo esetshenzisweni esetshenziswa kakhulu ngaphezulu kwesibambiso (i-OTC) i-heartburn drugPepcid. Ukuqunjelwa ngomlomo kushesha ngokwanele, kepha i-famotidine ingahle ihliswe i-acid esiswini ibangele ukuncipha kwamaphesenti kuze kube ngama-35,8% ngemuva kwemizuzu engama-50. Lesi sidakamizwa sibuye sifakwe i-metabolism yokuqala ephumela ekunciphiseni ukutholakala kwe-bio yayo kuphela kuze kube ngu-40-50%
Ekupheleni kuka-Ephreli 2020, i-famotidine nayo ifundelwa njengomuthi ongaba khona wokwelapha iziguli ezinesifo i-SARS-CoV-2 (coronavirus) esidale isifo i-COVID-19. Esivivinyweni somtholampilo, iziguli ezinesifo esibuhlungu se-coronavirus COVID-19 zithola i-Famotidine intrarally.
I-femotidine ejwayelekile equkethe izidakamizwa iyaziwa ngaphansi kwamagama ahlukahlukene omkhiqizo njenge-Pepcid AC, i-Acid Controller, i-Pepcid, i-Acid Reducer (i-Famotidine), i-Heartburn Prevention, ne-Heartburn Relief (i-Famotidine).
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kweSolid-Lipid Nanoparticles
Ukulungiswa kwe-Ultracot ye-Famotidine-egcwele i-lipid nanoparticles (SLNs) kuyindlela elula futhi ephumelelayo yokwenza uhlelo oluphezulu lokulethwa kwezidakamizwa olusezingeni eliphakeme nge-bioavailability ekhule kakhulu.
UZai et al. (I-2019) ilungiselele i-lipid nanoparticles (SLNs) eqinile isebenzisa indlela ye-hot emulsation esizwa nge-ultrasonic. Ingxubevange ye-Glyceryl monstearate ne-Span 20 (3: 1 w / w) yancibilika cishe. I-60 ° C futhi ingezwe i-Famotidine (2 mg / mL ye-vol vol.). Amanzi aqukethe i-poloxamer (4mg / mL) nawo ayephehlwa futhi. I-60 ° C futhi idluliselwe kwingxube ye-lipid encibilikisiwe. Isigaba se-lipid nesamanzi sixutshwe yi-homogenizer ephezulu ye-shear ngo-5,000 rpm ngemizuzu engu-5, sabe sesikhonjiswa nge-probe-Type ultrasonicator yemizuzu engu-5.
Imiphumela ikhombisile ukuthi i-Famotidine-egcwele umthwalo we-lipid nanoparticles yayinosayizi oyinhlayiyana oyisilinganiso wesilinganiso esingu-151,90 ± 26,05 nm nokusatshalaliswa kosayizi omncane (0,35 35 0,04). Ama-virotidine-alayishwe ngokuqinile ama-lipid nanoparticles aba nokusebenza okuphezulu kokufakwa kwe-82,30 ± 4,39% nokukhula kwe-bioavailability.
Umfanekiso we-TEM wama-nanoparticles alungiselelwe ngokuqinile we-lipid nanoparticles afakwe i-Famotidine (isikali esikhulukazi se-100nm)
umthombo: Zai et al. 2019
I-UIP1000hdT nge-reaction flow yeglasi yokukhiqiza okuqinile-lipid nanoparticle (SLN)
Izinzuzo ze-Ultrasonic SLN Ukulungiselela
Ukuguquguquka okulula, okusebenzayo
Ukulayisha okuphezulu kwama-molecule we-bioactive
Ama-Ultrasonicators aphezulu enza umsebenzi weP Pharma
I-Hielscher Ultrasonics yesikhathi eside isipiliyoni kumklamo, ukukhiqiza, ukusabalalisa kanye nensizakalo ye-homogenisers ephezulu esebenza kahle yomkhakha wezemithi nowokudla.
Ukulungiswa kwezinga eliphakeme eliqinile le-lipid nanoparticles, i-nanostructured lipid carriers, ama-liposomes, ama-niosomes, kanye ne-cyclodextrin ukufakwa kwezinqubo eziyinkambiso, okuyizinhlelo ze-Hielscher ultrasonic ezisetshenziselwa ukuthembeka okuphezulu nekhwalithi ephezulu yokuphuma. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher avumela ukulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha enqubo, njenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi namandla we-sonication. Isoftware ehlakaniphile ithela ngokuzenzakalelayo yonke imingcele ye-sonication (isikhathi, usuku, amplitude, amandla net, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi) ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi.
Ama-Nanocarriers okulethwa kwezidakamizwa
I-nanocarrier yi-nanomaterial esetshenziswa njengemodyuli yokuhamba kwenye into, njengomuthi. Ama-nanocarriers asetshenziswa ngokujwayelekile afaka ama-micelles, ama-polymers, ama-nanoparticles ama-core-shell, ama-liposomes, ama-dendrimers, ama-nanoparticles aqinile-ne-lipid nama-nanostructured lipid carriers. Enye yezinzuzo eziphambili ze-nanocarriers usayizi wabo wemizuzu obenza bakwazi ukungena ngamaseli futhi bahambise into elayishwe ku-izicubu eziqondisiwe. Ukwazi ukuguqula izakhiwo ezingokomzimba zama-nanocarriers, isb. Ukwakheka, ukwakheka nosayizi, ama-nanocarriers angahle asebenze ngokuqondile kumanxusa athile wezokwelapha namaphethini wokukhishwa kwezidakamizwa.